Faah faahino ka soo baxaya Qaraxyo saaka ka dhacay Baladweyne – SBC
Faah faahino ka soo baxaya Qaraxyo saaka ka dhacay Baladweyne
Faah faahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyo is xig xigay oo saaka lagula eegtay magaalada Baladweyne ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya xaafada xaawataago ee magaaladaasi .
sida la xaqiijiyay qaraxyadaasi ka dib ayaa waxaa geeriyooday dad rayid ah oo tiradoodu gaareyso 4 qof ka dib markii ay ciidamada Itoobiyaanka ah fureen rasaas islamarkaana ay haleeshay dadkani oo meesha ka agdhowaa.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in 4ta qof ee dhimatay ay ku jireen arday iyo haween da’ ah, waxaana ka dib ay sameeyeen ciidamada Itoobiya howlgalo balaaran kaas oo sida la rumeysan yahay ay ku qabqabteen dad aan tiradoda ka xaqiijin karin .
Ciidamada Itoobiya maalmihii ugu dambeeyay magaalada Baladweyne waxa ay ka wadeen howlgalo ka dib qarax xoogan oo is miidaamin ahaa oo halkaasi ka dhacay waxaana qaraxani lagu beegay xili ay wadada gooshayeen ciidamada iyagoona sameeynayay howgal aan baaxadweyn laheyn.
Dadka deegaanka ayaa cabsi xoogleh ka muujinaya dhacdooyinkan soo kordhaya ee ay inta badan iyagu ka soo gaareyso khasaaraha hadii ay ahaato in ay ku waxleeyoobaan rasaas ay fureen ciidanka iyo hadii ay ku waxyeeloobaanba waxyaabaha lagu soo weeraro ciidamada Itoobiya sida qaraxyada.